ICasa Amendoa-Ikhaya elimangalisayo lolwandle - I-Airbnb
ICasa Amendoa-Ikhaya elimangalisayo lolwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMisha
ICasa Amendoa yindawo entle yokulala eyi-4 kunxweme oluphambili lwaseTofo. Indlu ibekwe ngokugqibeleleyo njengoko iselunxwemeni ilitye lokugibisela ukusuka kwimakethi yaseTofo kunye nelali kodwa kwangaxeshanye ikhutshiwe ukuze ibonelele ngemfihlo umntu anokuyilindela.
ICasa Amendoa ibekwe kwindawo ephambili kuLwandle oluphambili lwaseTofo kodwa ikhwele kude nesiphithiphithi. Le ndlu yobunewunewu yokuziphekela ilala ayi-8 kumagumbi amane okulala atofotofo. Igumbi lokulala ngalinye kunye negumbi lokuhlala line-air conditioning kwaye indlu inikezelwa yonke imihla.
I-Casa Amenoa isanda kulungiswa (ngo-2014), kwaye inabo bonke ubutofotofo bendawo yokuqala yehlabathi, kunye nebhonasi eyongeziweyo yendawo yayo - kanye e-Tofo Beach. Ulwandle lufikeleleka kwizinyuko ezimfutshane, kwaye imarike, imivalo kunye neendawo zokutyela zaseTofo kukuhamba nje imizuzu emi-2.
Indlu ilungele izibini, iintsapho, okanye amaqela ezihlobo ajonge indlu yaselwandle engaqhelekanga.
Inkcazo yezinto eziluncedo (A/C kuwo onke amagumbi):
Igumbi lokulala eli-#1 elinebhedi yokumkanikazi, igumbi lokuhlambela leen-suite kunye negumbi lokunxiba lokuhamba.
Igumbi lokulala #2 elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite.
Igumbi lokulala #3 elineebhedi ezingamawele okanye ibhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
Igumbi lokulala #4 elineebhedi ezingamawele okanye ibhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
Igumbi lokulala ngalinye libandakanya inethi enkulu yeengcongconi. Kuyenzeka ukuba ufake ukhuko lomntwana ngaphakathi kwinethi yeengcongconi kwigumbi lokulala#1 kunye ne#2. (Kunikiwe ibhedi yomntwana)
Ilinen, iitawuli zokuhlambela kunye nephepha langasese linikezelwe.
Igumbi lokuhlambela eli-1 eline-jacuzzi kunye neshawari.
Igumbi lokuhlambela eli-1 elinebhafu kunye neshawari.
Igumbi lokuhlambela eli-1 kunye nebhafu kunye neshawa.
1 yangasese + isinki.
Ikhitshi enefenitshala epheleleyo eneploti esembindini. Uya kufumana zonke izixhobo eziyimfuneko: isitovu, ifriji kunye nesikhenkcezisi, isihluzo seceramic samanzi okusela...
Indawo yokugcina ukutya.
Itafile yokutyela ye8
Igumbi lokuhlala elikhulu elineesofa ezi-2
Idekhi kunye negadi enetafile kunye neebhentshi
Umatshini wokuhlamba impahla : Wamkelekile ukuba wenze inkonzo yokuhlamba impahla. Buza abasebenzi ukuba baya kukwenzela oko. (Zithengele umgubo wokuvasa - ingcebiso iya kuhlala ixabiswa).
Indlu inabasebenzi abathathu:
-Umgcini wendlu kunye nomncedisi wakhe baya kulungiselela indlu yokufika kwakho. Bakwanoxanduva lokugcinwa kwendlu yemihla ngemihla, kunye neminye imisebenzi emincinci njengoko inokufunwa nguwe amaxesha ngamaxesha. Ziyafumaneka ngezi yure zokusebenza zilandelayo: ngoMvulo ukuya ngeCawa : 8am ukuya 6pm.
-Umlindi wasebusuku uqinisekisa ukhuseleko lwakho kwaye uyafumaneka ngezi yure zokusebenza zilandelayo: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo : 6pm ukuya 8am. Sunday : off
Ukongeza, qiniseka ukuba ugcina izinto zakho zexabiso kwiisefu ezi-4 ezibonelelweyo.
I-villa iphambi kweyona ndawo ilungileyo yolwandle lwaseTofo lokuqubha kunye ne-longboarding okanye i-SUP'ing.
IMISEBENZI: i-scuba diving, i-safari yolwandle (ukusondela kwiminenga emininzi, i-whale sharks, amahlengesi kunye nofudo, ukuhamba ngenqanawa phambi kwe-bay), ukusefa, ukusefa, ukusefa, ukuntywila emanzini, ukuloba, ukukhwela amahashe nokunye. Sinokukunceda ngokuququzelela imisebenzi ukuba uyayifuna.
Idolophu yase-Inhambane ikumgama oziikhilomitha ezingama-25 kwaye yindawo yelifa lehlabathi. Yidolophu ethandekayo yasePortugal enechweba elikhulu lechweba. Inkonzo yebhasi ifumaneka yonke imihla phakathi kweTofo neInhambane.
Umbuki zindwendwe ngu- Misha
Ekufikeni kwakho andizukubakho ngokobuqu kodwa iiarhente zethu emhlabeni uLorien noPhilipp baya kukwamkela, bakuse endlwini, bakwazise kubasebenzi kwaye bakunike isitshixo sendlu…. Bobabini basazi kakuhle isiNgesi.
Endlwini uya kufumana i-logbook enalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukukunceda ukuba ufumane okuninzi kokuhlala kwakho eTofo. Ukuba ufuna ukubhukisha i-safari yolwandle ngokomzekelo kunye naluphi na uhlobo lolwazi oludingayo, unganqikazi ukuqhagamshelana noLorien okanye uPhilipp.
Ekufikeni kwakho andizukubakho ngokobuqu kodwa iiarhente zethu emhlabeni uLorien noPhilipp baya kukwamkela, bakuse endlwini, bakwazise kubasebenzi kwaye bakunike isitshixo sendlu….…